မြန်မာ့ အံ့မခန်း တောတောင်ရေမြေ သဘာဝရှုခင်းများကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်ပြသသည့် ဓာတ်ပုံပြပွဲ | WWF
Home » သတင်းဌာန
မြန်မာ့ အံ့မခန်း တောတောင်ရေမြေ သဘာဝရှုခင်းများကို ရိုက်ကူး တင်ဆက်ပြသသည့် ဓာတ်ပုံပြပွဲ
A local fisherman fishing inastream
© WWF / Min Zayar
လူသားနှင့် သဘာဝ (Human. Nature.) ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ ပြပွဲတွင် ဆုရ ဓာတ်ပုံပညာရှင် မင်းဇေယျာ၏ လက်ရာများနှင့်အတူ ယခင်က မတွေ့မမြင်ဖူးသေးသော တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၏ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံများကို ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့ WWF အနေဖြင့် ဤနိုင်ငံအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်သည့် မြန်မာ့ “သဘာဝ အရင်းအနှီးများ” ၏ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ တန်ဖိုးများအား ဆန်းစစ်သုံးသပ်သည့် စီမံကိန်းတစ်ခု၏ ရလာဒ်များကို ပြသနိုင်ရန် ယင်းပြပွဲကို ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ မကြုံစဖူးတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ အများအပြားက အပြုသဘော ဆောင်နေပေမယ့်လဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေမှု နှုန်းက သစ်တောတွေ၊ မြစ်တွေနဲ့ ကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေလိုမျိုး အရေးပါလှတဲ့ သဘာဝ အရင်းအမြစ်တွေကို ခြိမ်းခြောက်လာ နေပါတယ်။ ဒီပြပွဲမှာ ဒီအရင်းအမြစ်တွေကို ကာကွယ်တာဟာ မြန်မာ့ ပြည်သူတွေနဲ့ သားငှက်တိရစ္ဆာန်တွေအတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိပ္ပံနဲ့ အနုပညာ ပေါင်းစပ်ပြီး ပြသထားပါတယ်။” ဟု WWF-မြန်မာ၏ ဌာနေ ညွှန်ကြားရေးမှူး ခရစ္စတီး ဝီလျံက ပြောကြားခဲ့သည်။
သဘာဝ ချိတ်ဆက်မှုများ - မြန်မာ့ ပြည်သူနှင့် စီးပွားရေးအား သဘာဝအရင်းအနှီးများ၏ အကျိုးပြုပုံ ဟု အမည်ပေးထားသည့် အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသော စီမံကိန်းရလာဒ်များကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံ၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များအား ဖော်ထုတ်ပြသထားသည့် ထူးခြားဆန်းသစ်သော မြေပုံများကို ဖန်တီးကာ ပြပွဲ၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် ပြသထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြပွဲတွင် ဓာတ်ပုံလက်ရာများ ထည့်သွင်းပြသထားသည့် မြန်မာ ဓာတ်ပုံပညာရှင် မင်းဇေယျာဦးကလည်း ယင်း၏ လက်ရာများက “ကျွန်တော်တို့နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဘယ်လောက် နီးနီးစပ်စပ် ဆက်နွယ်နေတယ် ဆိုတာနဲ့ ဘာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ လိုတယ် ဆိုတာကို နားလည်လာအောင် ထောက်ကူပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။” ဟု ဆိုပါသည်။
“ထူးခြားလှတဲ့ ဒီဒေသကို ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရင်း၊ ဒီဒေသမှာ နေကြသူတွေရဲ့ ဘဝတွေအကြောင်းကို နားထောင်ရင်း ကျွန်တော်တို့တွေ အစားအစာ၊ အသက်မွေးမှု၊ ရှင်သန်ရပ်တည်မှုတွေအတွက် သဘာဝတရားကြီးကို ဘယ်လောက်တောင် မှီခိုနေရတယ် ဆိုတာကို နားလည်လာရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တွေ ဆုံးရှုံးရဖို့ ရှိနေတဲ့ အရာတွေအတွက်လဲ စိတ်ခြောက်ခြားမိပါတယ်။” ဟု မင်းဇေယျာက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ကရင်သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (KWCI) ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ မျိုးသုဉ်း ပျောက်ကွယ်ရန် အလွန်နီးစပ်နေသော မျိုးစိတ်အချို့အား အဝေးထိန်း ကင်မရာထောင်ချောက်များမှ ရိုက်ယူထားသည့် ရှားပါး ဓာတ်ပုံများကိုလည်း ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူသားနှင့် သဘာဝ (Human. Nature.) ဓာတ်ပုံပြပွဲကို မြန်မာဒိဋ္ဌ အနုပညာပြခန်း၊ ၄၄ လမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် မေလ ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၅ နာရီခွဲအချိန်မှ စတင် ဖွင့်လှစ် ပြသသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ဧည့်သည်တော်များ ဖြစ်သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ ပါတီဝင် ဦးဝင်းကိုကိုဝင်း၊ Myanmar Climate Change Alliance အဖွဲ့မှ Chief Technical Advisor ဖြစ်သူ Pasquale Capizzi၊ UNEP နှင့် UN-Habitat တို့မှ ဖိတ်ကြားထားသူများနှင့်အတူ WWF-မြန်မာမှ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဟန်နာဟယ်ဆင်ဂန်တို့က ဝိုင်းဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ထည့်သွင်း ပြုလုပ်သွားမည်။ အခြား ဆွေးနွေးမည်သူများကို ဆက်လက် အတည်ပြုပေးသွားပါမည်။
WWF ၏ သဘာဝအရင်းအနှီး စီမံကိန်းမှ ရလာဒ်များကို Natural Connections: How natural capital benefits Myanmar's people and economy အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ အဆိုပါ အစီရီခံစာ ကို လိုအပ်ပါက WWF-မြန်မာသို့ အောက်ပါ အီးမေးလ်မှတဆင့် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင် ပါသည်။
ပြပွဲတွင် ပြသမည့် ဓာတ်ပုံများထဲမှ တစ်ပုံကို ဤ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ပူးတွဲ ပေးပို့အပ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါ © WWF / Min Zayar ဟု ရည်ညွှန်းဖော်ပြပေးပါရန်။
အခြား သိလိုသည်များ စုံစမ်းရန်-
ဦးရဲမင်းသွင်၊ ဆက်သွယ်ဆက်ဆံရေး အရာရှိ၊ WWF-မြန်မာ
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနှင့် အများလေးစားမှု အခံရဆုံးသော အမှီအခိုကင်းသည့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အဖွဲ့အစည်းများအနက် တစ်ခု ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာအဝှမ်း နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင် ထောက်ခံ အားပေးသူ ၅ သန်းကျော်၏ အကူအညီဖြင့် လည်ပတ် ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ WWF ၏ လုပ်ငန်း ရည်မှန်းချက်မှာ ဇီဝမျိုးကွဲများ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့နိုင်သော ပြန်လည် ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင် ကို အသုံးပြုရန်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေ၍ အလဟဿ ပြုန်းတီးစေသည့် အသုံးပြုမှုများအား လျှော့ချရန် အားပေး တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာမြေ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ယိုယွင်းလာမှုကို တားဆီးရန်နှင့် လူသားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဟန်ချက်ညီ ရှင်သန်နေထိုင်သော အနာဂတ်တစ်ခု တည်ဆောက်ရေး ဖြစ်သည်။ WWF ၏ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လုပ်ငန်း အများအပြားသည် တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့ကို အဓိက အာရုံစိုက်သည်။
© WWF / Min Zayar Enlarge
A kid swimming inastream